Door muhiim ah ayeey Gabdhahu ku leeyihiin hormarka bulshada | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Door muhiim ah ayeey Gabdhahu ku leeyihiin hormarka bulshada
Gabdhuhu waxa ay ka mid yihiin xubnaha ugu firfircoon qoysaska Soomaliyeed ,isla markaana ku sifoobay hab dhaqan iyo akhlaaq suuban oo ifinaya kaalinta ay kaga jiran bulsha .
Gabdhaha Soomaaliyeed waa kuwo lagu tiriyo in ay yihiin awodda keliya ee la loolami karta Ragga,marka loo eego waxqabadka iyo maareynta nolosha bulshada,iyagoo marna ah kaabayaal surtagalin kara horumarka Gurigga iyo guud ahaan kan dalka.
Howlaha iyo waxqabadka kale ee u gaarka ah Gabdhaha Soomaaliyeed waa koriinta iyo soo barbaarinta carruurta iyo taakuleynta qosyka ,iyagoo dhexda u xirtay badqabka da’yarta si aysan u noqon kuwo ka dhaca noloosha aadaanaha.
Dhaqan kasta oo lagu soo barbaarayo carruuta ayaa ka dhiga mid ay ku guuleysta ama ay ku guuldareystan,taasoo oo micna ahaan tahay in
carruurta ay u baahan yihiin badbaado caafimaad qabta iyo in la ilaalsho habdhaqanka bulshada ay ku dhaxnool yihiin.
Inkastoo Gabdho badan ay ka wecdeen habka noloosha iyo soo barbaarinta dhallaanka haddana waxaa jira haween badan oo guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay uga soo bixii lahayeen doorkoodi ku aadan qoysaska iyo soo saarsita bulsho caafimadda qabta oo ayahooda ka talisa.
Carruurta waxa aad ugu nugul yihiin daruufaha jira iyo in ay la jaan qaadan kala duwaanaanta dabeecaddaha dadka kula nool guriga iyo deegaanka ,sidaa daraadeed,waxa badbaadada u ah qoyska waa Gabadha Soomaaliyeed ee markasta u taagan daryeelka gaarka ah iyo kan guud.
Gabdhaha kuwooda waxbartay waxay tartan u galaan sidii ay u maarayn lahayeen nolosha qoyskooda, inkastoo marka haweenka ay waxbartaan ay la kulmaan cadaadisyo kala duwan oo ka soo wajaaha xarumaha shaqooyinka iyo ragga ay la noolyihiin.
Caqabado kala duwan ayaa gabdhaha Soomaliyeed ka hor-istaaga inay waxbarashada u helaan si la mid ah tan wiilasha, waxaana ka mid ah saboolnimada, guurka degdego , waaladiinta oo aan dhiirrigelin gabdhaha iyo kuwo kale,kuwaas oo aan lagu soo koobi Karin qormadaan,isla markaana u baahan cilmi baaris gaar ah.
Waalidku waxa ay inta badan xooga saran in ay gabdhu ka shaqeyso guriga, halka wiilashu ay galan nasiino,tasina waxa ay u muuqataa caddaalad darro matka loo eego sinnaanta xagga shada Gurigga,waxayna waalidiintu door bidaan im wiilku wax barto,Gabadhuna ay noqoto Guri joogto.
Waxaa la saadaaliyay in inta badan gabdhaha Soomaaliyeed aysan guul fiican ka keenin dhinaca waxbarashada, sababtoo ah markii ay gaarto da’da qaan-gaarka ayaa waalidka waxaa ay qorsheyaan in loo guuriyo nin, iyadoo halkaas uu ku burburo himiladii waxbarasho ee gabadha,waxaana sidoo kale dhibaatooyinka heysta dumarka ugu weyn inloo arko mid nolosheedu ay ku kooban tahay shaqada guriga oo kaliya.
Nolosha Gabadha waxa ay qoysasku ku soo koobeen in ay kariso raashinka ,ilmaha heyso iyo aadeega qoyska, taas ayaana qayb ka qaadta in ay ku niyad jabto oo ay kagag harto hankii iyo himiiladii ay lahayd waxayna ku degdegtaa in ay u wareeto dhnaka guurka,iyadoo ’’dadka Soomaaliyeed ay halqabsi ka dhigteen gabdh wax bartay waa buldho wax barta,’’ balse waalidiinta qaar arintaasi kuma baraarugsana in gabdhu tahay awood qarsoon oo bulshada wax ku soo kor dhin karta.
Isku soo wadda duub waxay gabadh waliba xaq u leedahay in ay gaarto yoolka iyo himiilada ay higsaneyso,si loo yareeyo aqoon la’aanta gabdhaha, burburka qoyska iyo xannaano la’aanta carruurta yaryar, maadaama ay yihiin unugii bulshada iyo wax soo saarka bulsho caafimaad qabta
W/Q :- Naciimo Cabdi Siciid (Shiino)
Previous articleWasiir Maareeye oo milkiilayaasha Hoteellada iyo dalxiisayaasha faray in ay isa soo diiwaan geliyaan+Sawirro
Next articleDuqa Muqdisho oo muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo 30-sano si sharci daro ah looga heystay+Sawirro